Aeit-htiyahood in Modern Burma ဝေဝေနဲ့မမလေးတို့အကြောင်း | Bo ဘိုဘိုလန်းစင်
« ရာဇဝင်ကို ဖြတ်သန်းခြင်း ၃
ပုဏ္ဏက ကျားမြီးဆွဲကောင်းခြင်း »
Aeit-htiyahood in Modern Burma ဝေဝေနဲ့မမလေးတို့အကြောင်း	17Feb11
Refiguring Women, Colonialism, and Modernity in Burma by Chie Ikeya January 2011, University of Hawai`i Press.
ရှမ်း-ဂျပန်အမျိုးသမီး မချိအဲစာအုပ်က စစ်ကြီးမဖြစ်ခင် မြန်မာအမျိုးသမီးလေ့လာမှုမှာ ဒေါ်မီမီခိုင်ရဲ့
The World of Burmese Women (1984) နောက်မှာ ပထမဆုံး ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ပေါ်ထွက်လာတာပါ။ မြန်မာခေတ်ပြိုင်စာအုပ်စာတမ်းများကိုလဲ လှိုင်လှိုင်ကြီး ကိုးကားလို့ပါ။ ဗမာလို တက္ကသိုလ်ကြည်မာ၊ စောမုံညင်းတို့ အရေးအသားများလောက်ပဲ ဖတ်စရာရှိရာကနေ အခုကိုးကားညွှန်ပြစရာ တအုပ်ထွက်လာပါပီ။ ဒေါက်တာမစောဆ၊ ဒဂုန်ခင်ခင်လေး၊ ဒေါ်စန်း၊ ဒေါ်မြစိန်၊ ခင်မျိုးချစ်၊ လူထုဒေါ်အမာ၊ ဂျာနယ်ကျော်မမလေးစတဲ့ ဧရာမ မိန်းမကြီးများ ရှေ့ကလမ်းဖောက်သွားခဲ့လို့ နောင်လာသမီးများ ဘယ်လောက်ထိ အကျိုးခံစားရတယ်၊ ဘယ်နေရာမတော့ ပြန်ဆုတ်ယုတ်နေတယ်ဆိုတာတွေ နှိုင်းယှဉ်လို့ရပါတယ်။ တခေတ်ထက် တခေတ်ပိုအမြင်ကျဉ်းလာတဲ့ မြန်မာပုရိသအစိုးရမင်းများအမြင်မှာ ပြလိုတဲ့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ညီညွတ်တဲ့
မြန်မာအမျိုးသမီးဆိုတာ ဘယ်လို ပေါ်ထွက်လာတာလဲ၊ ကျနော်တို့ အဖွားများ၊ အမေများခေတ်နဲ့
ခု နှမတွေ အမတွေလက်ထက် အဆင့်ဆင့် အမျိုးသမီးဘဝအမြင် ဘယ်လိုခြားနားခဲ့ပီလဲ။
ခေတ်မီတယ်ဆိုတာတွေဟာ နယ်ချဲ့အရင်းရှင်တွေကြောင့်လား မြန်မာတွေကိုယ်တိုင်
မရှင်းမရှင်းရောထွေးလက်ခံ ဆန့်ကျင်ထားတာတွေကို အသေးစိတ်ဆွေးနွေးထားပါတယ်။ ဒီစာအုပ်မှာ အကြိုက်ဆုံးတချက်ကတော့ ၁၉၂၀-၃၀ အတွင်း တက္ကသိုလ်ပညာရေးရရှိလာမှုနဲ့ ကာလပေါ်မဂ္ဂဇင်းများက အမျိုးသမီးကဏ္ဍ (ယုဝတီစက္ခုတွေ)ကျေးဇူးကြောင့် အမျိုးသမီးစာတတ်နှုန်း ဘယ်လိုတက်လာတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ကျနော်တို့ အထင်မကြီးလှတဲ့ လယ်တီပဏ္ဍိတဆရာမောင်ကြီးရဲ့ နီတိမဉ္ဇရီ၊ ထေရီထေရာအပဒါန်တွေကြောင့် စာတတ်ပေတတ်ဖြစ်လာတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ထောင်နဲ့ချီခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ ခေတ်မီပြောင်းလဲရေးမှာ ကာလပေါ်ဝတ္ထု၊ သိပ္ပံနဲ့ ဝါဏိဇ္ဇ(အီကော်နော်မစ်အတတ်)တွေကို ဘုရားစာ ရာဇဝင်တွေနဲ့ ရောယှက်ပေးခဲ့တဲ့ ဒဂုန်၊ တိုးတက်ရေးစတဲ့ရှေးရိုးမဂ္ဂဇင်းကြီးတွေရဲ့ ဗျူဟာကို ဆဝါးမိဖို့ ခုကာလ ဂလိုဘယ်ဆရာ ချာတိတ်ဗေဒင်သမားတွေကို မုံရွာလယ်တီတိုက်ကို စတယ်ဒီတိုးလွှတ်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ လယ်တီဖဲလိုးရှစ်၊ မစိုးရိမ်ပရိုဂရမ်တွေလဲ ဗုဒ္ဓကျမ်းဂန်လေ့လာရေးမှာ ဂုဏ်မငယ်လှပါဘူး)
ပြုစုသူက ကော်နဲလ်တက္ကသိုလ်က ပါရဂူဘွဲ့ရ၊ စင်္ကာပူအမျိုးသားတက္ကသိုလ် အရှေ့တောင်အာရှ လေ့လာရေးဌာနမှာ တွဲဘက်ပါမောက္ခ ၃၀ ကျော် အမျိုးသမီးတယောက်ပါ။ မကြာခင်လဲ သမိုင်းပညာရှင် အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ စစ်ပီးခေတ်မြန်မာအမျိုးသမီးတွေအကြောင်း စာတအုပ် အနောက်တိုင်းမှာ ထုတ်ဝေအုန်းမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခရီးမဆက်နိုင်ခဲ့တဲ့ ပညာရှင်သုတေသီဘဝနဲ့ တိုင်းပြည်အကျိုးဆောင်နိုင်တဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးကောင်းတွေ အများကြီးလိုနေပါသေးတယ်။ မေသန်း-ပျို့လက်ရုံး အမေရိကန်သီချင်းအလိုက် မြန်မာအမျိုးသမီးလှုံ့ဆော်တေး (စစ်မဖြစ်ခင်ကလေး)
“…The study demonstrates the irreducible heterogeneity of the colonial encounter and draws attention to the conjoined development of cosmopolitanism and nationalism. Ikeya illuminates the important roles that Burmese men and women played as cultural brokers and agents of modernity. She shows how their complex engagements with social reform, feminism, anticolonialism, media, and consumerism rearticulated the boundaries of belonging and foreignness in religious, racial, and ethnic terms. ”
Filed under: Burmese women, history, literature, nationalism, news	| LeaveaComment	No Responses Yet to “Aeit-htiyahood in Modern Burma ဝေဝေနဲ့မမလေးတို့အကြောင်း”	Feed for this Entry